TOP 10 fiidiyow oo ah faracyadii ugu xumaa Ha moogaan! - ULLER
Digniin: KELIYA KU HABOON KHATARAYAASHA NATOS, JACAYLKA FADLAN.
Dareen aan laga gudbi karin ayaa soo socota, waxaad dareemaysaa dabaysha oo maraysa wajigaaga ... dhiiga oo si xoog leh u qulqulaya, adrenalin oo jidhka ku dhex qulqulaysa, maskaxduna waxay diirada saartay hal ujeedo: si loo gaadho dhamaadka jiinka.
Kuwani waa qaar ka mid ah shucuurta ay freeriders-ka runta ahi dareemaan markay ku soo degayaan xawaare buuxa.
Waxaan rabnaa inaad dib ugula noolaato dareenkaas hoose xulkeena 10ka abtirsiinyada ugu daran:
Xirfadleyda xirfadleyda ah ee Mareykanka ah waxay ahayd haweeneydii ugu horreysay ee kaqeyb gasho filim hoosta sumadda Teton Gravity Research.
Relive Angel's adrenaline degdega oo hoos u dhacaya mid ka mid ah buuraha Juneau, Alaska oo ay weheliyaan Sage Cattabriga-Alosa, Ian McIntosh iyo Dana Flahr.
Wuxuu yidhi muddadaa uu ka soo jeeday, wuxuu ka baxay aaggiisii ​​raaxada oo xirfadihiisii ​​ayuu imtixaanka geliyey.
Xiddiga reer France ee Xavier De Le Rue ayaan waligiis ka joogsan la yaabka leh awooddiisa cajiibka ah ee uu ku sii wadi karo ka soo kabashada buurta buur kadib. Dareenkiisa ayaa ah inuu si dhakhso leh u sii socdo. De Le Rue wuxuu ku guuleystey inuu sameeyo wax ka fog waxa uu gaari wadaha kale awood u leeyahay.
Fiidiyowga, barafka barafku wuxuu wajahayaa hoos u dhac aad u daran oo ku xeeran buuraha Haines ee Alaska, isagoo raadinaya sawirradii ugu fiicnaa iyo tallaaladii.
32 sano jir buuraha Polishka Andrezj Bargiel wuxuu ku guuleystay wax umuuqda mid aan macquul aheyn 2018: 8.611-mitir oo buuxa oo ah K2, kan labaad ee ugu sareeya aduunka kadib Everest, wuxuu usbuucyo dhowr ah ku qaatay cagaha Himalaya la jaanqaad dhererka.
K2 waxaa badanaa loo yaqaan "buurta dila" ama "buuraha duurjoogta" dhibaatooyinka jira awgood.
Si loo sameeyo soo degitaankan, Bargiel iyo kooxdiisu waxay ku qasbanaadeen inay si taxaddar leh u darsaan wadada ugu fiican adoo adeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Waxaa loo tixgeliyaa faracii ugu adkaa uguna adkaa ee 2014. The American Cody Townsend wuxuu helay Abaalmarinta Powder isla sanadkaas Salt Lake City iyo Khadka Sky ee ugu Fiican, kaas oo lagu aqoonsado cayaaraha isboorti ee ugu fiican, ee isirka barafka ee Tordrillo Peak In alaska.
Fiidiyowga waxaad ku arki kartaa sida Cody uu ugu soo degay 75 kiiloomitir saacaddii, oo ah waddo aan caadi ahayn oo ku socota buurta oo dhan. Soo degitaanku wuxuu socday 30 ilbiriqsi oo aad u daran.
Richard Permin, Markus Eder iyo Cody Townsend, 2015
Rakiilayaasha 'pro skiers' Richard, Markus iyo Cody waxay ku raaxaystaan ​​xoogaa hoos u dhac ah si ay u lumiyaan, maaddaama ay xirfadahooda u dhigayaan imtixaanka dusha sare.
Khadadka Ski ee ugu Fiican Freeride 2019
Isku soo uruurinta khadadka ugu fiican freeride barafka ee 2019. Laga bilaabo Hakuba, Japan oo ay weheliyaan Arianna Tricomi iyo Markus Eder. Kadib u sii wad Kick faras, Kanada oo ay weheliyaan Craig Murray iyo Jacqueline Pollard.
Magaalada Fieberbrunn, Austria oo ay weheliyaan Hedvig Wessel iyo Markus Eder. Ku sii wad Ordino Arcalís, Andorra oo ay weheliyaan Leo Slemett iyo Jaclyn Paaso. Ugu dambeyntiina wuxuu ku dhammaanayaa Verbier, Switzerland iyada iyo Elisabeth Gerritzen iyo Wadeck Gorak.
Ku soo biir fuulista John Jackson markuu kaxeynayo buuraha Alaska. Fiidiyow soo koobaya khibradiisa oo dhan, sida dhabta ah ee kugu martiqaadaya inaad isku daydo mid ka mid ah faracyada ugu daran ee ka jira dhulka Alaska.
Owen Leeper, Jackson Hole, Mareykanka, 2019
Muuqaal kooban oo ku saabsan asalka cajiibka ah ee mootada Owen Leeper ee Jackson Hole, Mareykanka.
Aragtida iyo dalxiisyada fiidiyowga ayaa soo jiitay dareenka boqolaal taageerayaal ah, iyagoo siinaya meel isla markaana kordhinaya caan ka noqoshada adduunka barafka.
Bode Miller, "Shimbiraha Ugaadha" Koobka Adduunka
Fiidiyowgu waa muuqaal laga soo duubay Bode Miller aragtidiisa ku aaddan xawaaraha buuxa ee Koobka Adduunka.
Terje Håkonsen, Alaska, 90-naadkii
Faracani ma ka maqnaan karo liistadayada!
Ninka sarkaalka barafka ah ee reer Norway Terje H ,konsen, ayaa loo arkaa mid ka mid ah kuwa ugu saameynta badan barafka wakhtiga oo dhan isla markaana abuuray hal-abuurka hawada Haakon Flip.
Waa muuqaal muddo sannado ah soo jiray, laakiin waa muuqaal soo jireen ah oo aan jecel nahay inaan dib u soo noolaanno. Terje waxaa suuragal ah in loo tixgeliyo barafka ugu fiican taariikhda, dhaxalkiisa aan la dafiri karin iyo awoodiisa jireed ee aan lala simin.
Haddii aad jeceshahay liistadayada oo aad haysatid fiidiyowyo badan oo qabow oo ka soo jeeda qowmiyadaha ba'an, ku wadaagaan hoosta faallooyinka. Xusuusnow inaad naga raacdo shabakadeena @Iller_co si aad ugu raaxaysato fiidiyowyo badan oo sidan oo kale ah.
Baro tartamada isboorti ee ugu fiican iyo dhacdooyinka Yurub iyo adduunka! Waxaa jira kulmiyaal badan oo tacabur adduunka ah, laga soo bilaabo kuwa ugu yaabka badan uguna asalka, illaa kan ugu caansan,